UShinran Shonin - uMsunguli weJodo Shinshu
Umsunguli we-Trailblazing kaJodo Shinshu
UShinran Shonin (1173-1262) wayeyi-innovator nomlawuli-mthetho. Wasekela isikolo esikhulu kunazo zonke seBuddhism eJapan, uJodo Shinshu , ngamanye amaxesha abizwa ngokuba yiBhindhism nje "Shin". Ukususela ekuqaleni kwakhe uJodo Shinshu wayeyinxalenye yecala elilinganayo, kungekho namonki, abaphathi abahloniphekileyo okanye igunya eliphambili, kwaye abantu baseJapan bawamkela.
UShinran wazalelwa kwintsapho ehloniphekileyo eyayiye yahlulelwa yiNkundla.
Wayemisela umonkethi oneminyaka engama-9 ubudala, kwaye emva nje kokungena kwakhe ethempelini likaHiiizan Enryakuji eNtabeni Hiei , eKyoto. Intaba iHiiyi i- Tendai monastery, kunye neTendai Buddhism Iyaziwa ngokuyinhloko ngokuvumelanisa kwayo imfundiso yezikolo ezininzi. Ngokomthombo othile, intsha yaseShinran yayinokuba yi- doso, okanye i-"monk hall," eyenziwa kwiiNgcaciso zomhlaba.
UbuBuddhism bomhlaba obulungileyo buvela ekuqaleni kwekhulu le-5 le-China. Umhlaba ochanekileyo ugxininisa ukholo kwi- Imitabha Buddha. Ukuzinikela ku-Amitabha kwenza ukuba kuzalwe kabusha kwiparadesi yasentshonalanga, umhlaba oQinisekile, apho ukukhanyiselwa kubonakala lula. Umgangatho oyintloko woMhlaba oPhezulu yi- nembutsu, ukuphindaphinda kwegama lika-Amitabha. Njengengqungquthela, iShinran yayiza kuchitha ixesha elide lijikeleza umfanekiso we-Amitabha, ukulila (ngesiJapan) uNamu Amida Butsu - "ukuthobela u-Amitabha Buddha."
Ubomi bukaShinran de wayeneminyaka engama-29 ubudala.
U-Honen (1133-1212) wayengomnye umnandi waseTendai owayeye waqhelisela ixesha kwiNtaba yeHii, kwaye naye wayetyelelwa kwiBuddhism yeLizwe elungileyo. Ngexesha elithile, u-Honen washiya i-Mount Hiei waza wahlala kwelinye iindwendwe eKyoto, iNtaba yaseKrodani, eyayinomdla weZakhiwo eziQinisekileyo zoMhlaba.
U-Honen waqulunqa umkhuba wokugcina igama lika-Amitabha ngengqondo ngamaxesha onke, isenzo esixhaswa ngokubetha i-nembutsu ixesha elide. Oku bekuya kuba sisiseko seSikolo saseJapan esiQinisekileyo seMhlaba esibizwa ngokuba nguJodo Shu. Idumela lika-Honen njengoko utitshala waqala ukusasazeka kwaye kufuneka ukuba afinyelele eShinran kwiNtaba yeHiii. Ngo-1207 uShinran wasuka eNtabeni iHii ukujoyina inkululeko ye-Honen ye-Land.
U-Honen wayekholelwa ngokunyanisekileyo ukuba umkhuba awayewuphuhlisile nguye kuphela onokuphila kwixesha elibizwa ngokuba yi- mappo , apho kulindeleke ukuba ubuBuddha buyeke . U-Honen ngokwakhe akazange anike ilizwi ngeli gama ngaphandle kwesangqa sa bafundi.
Kodwa abanye abafundi baka-Honen babengenakucacisa. Abazange bamemezele ngokukhawuleza ukuba ubuBuddhism buka-Honen yiyona kuphela yeBuddhism yangempela; Baye banquma ukuba kuyenze ukuziphatha kakubi. Ngama-1206 ababini bee-monks zika-Honen bafunyenwe ukuba bachithe ubusuku emigodini yamantombazana ebhotwe lababusi. Amane e-Honen amane abulawa, kwaye ngo-1207 u-Honen ngokwakhe waphoqelelwa ekuthunjweni.
UShinran wayengelona linye lala ma-monks osolwa ngokungaziphathi kakuhle, kodwa waxoshwa eKyoto kwaye wanyanzeliswa ukuba ashenxise aze abe ngumntu ongenalo. Emva kwe-1207 yena no-Honen abazange badibana kwakhona.
IShinran i Layman
Shrinran wayeneminyaka engama-35 ubudala.
Wayeyi-monk ukususela kwiminyaka eyi-9. Yayikuphela kobomi ayesazi, kwaye kungabi yintlanki yayimangalisa. Nangona kunjalo, ulungelelanise ngokufanelekileyo ukufumana umfazi, uEshinni. UShrinran no-Eshinni babe nabantwana abathandathu.
Ngomnyaka we-1211 uShinran wayexolelwe, kodwa yena wayeselumyeni otshatileyo kwaye akakwazanga ukuqala ukuba ngumonki. Ngo-1214 yena nentsapho yakhe bashiya iPhondo lase-Echigo, apho bebanjwe khona, bathuthela kwindawo ebizwa ngokuba yiCanato, namhlanje ehlala eTokyo.
IShinran yavelisa indlela yakhe eyahlukileyo kwiLizwe elinyulu ngelixa ehlala eKhana. Esikhundleni sokuphindaphinda ngokuphindaphindiweyo kwe-nembutsu, wagqiba isigqibo sokubakho ukuphindaphinda okwaneleyo xa uthetha ngokholo olumsulwa. Ukuphindaphinda kwakhona kwakubonisa nje ukubonga.
I-Shinran icinga indlela ka-Honen eyenziwa ngayo umcimbi wemizamo yakhe, ebonisa ukungabi nethemba kwi-Amitabha.
Endaweni yokwenza umgudu opheleleyo, uShinran wanquma ukuba udokotela wayedinga ukunyaniseka, ukholo, kunye nesifiso sokuzalwa kwakhona kwiLizwe elinyulu. Ngo-1224 wapapasha i- Kyogyoshinsho, eyenza iMahayana sutras kunye neenkcazelo zakhe.
Unokuqiniseka ngakumbi ngoku, iShinran yaqala ukuhamba nokufundisa. Wafundisa kumakhaya abantu, kwaye amabandla amancinci aphuhliswa ngaphandle kolawulo olusemthethweni. Akazange athathe abalandeli kwaye akazange avume ukuhlonishwa ngokuqhelekileyo kunikelwa ootitshala.Le nkqubo yokulingana yabuyela entlekweni, nangona kunjalo, xa uShinran wabuyela eKyoto malunga ne-1234. Abanye abazinikeleyo bazama ukuzenza iziphathimandla kunye neenguqu zabo zemfundiso. Omnye walawa wayengunyana odala kunaShinran, uZenran, lowo uShinran wayephoqelelwe ukuba amphike.
UShinran wafa emva kwangoko, eneminyaka engama-90. Ilifa lakhe nguJodo Shinshu, elide lihlobo oludumileyo lobuBuddha eJapan, ngoku ngokuqhutywa kweentlanganiso emhlabeni jikelele.
Ngaba I-Karma Yenza Iintlekele Zendalo?
Ukuqonda iCFRP Composites
Amanqanaba okukhanyisa ngeErgonomic ngeGumbi leZithuba zokuHlala
Abafazi base-Afrika nabama-American kwi-Jim Crow Era
I-10 ye-Metal Hair / iPop Metal Iingoma zee-80s